Honor Magic Watch 2၊ ဘက်ထရီ၊ စျေးနှုန်းနှင့်အခြားသောအရာများ Gadget သတင်း
Rafa Rodriguez Ballesteros | | ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ, စမတ်နာရီ
Honor သည်စမတ်နာရီသစ်ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ငါတို့သိကြ၏ Honor Watch မှော်ဆရာ2ဘာဖြစ်တာလဲ သတင်းနှင့်အတူတင်ဆောင်။ တချို့ကကြိုက်တယ် ဒီဇိုင်းကို update ကို သိသာဖြစ်ကြသည်။ နှင့်အခြားအင်္ဂါရပ်များ, ငါတို့မျက်စိအားဖြင့်မမြင်ရပေမယ့်, ဒီဗားရှင်းအသစ်ကအရင်ထက်သိသိသာသာပိုကောင်းစေ။
အထင်ရှားဆုံးအင်္ဂါရပ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည် ကြီးမားတဲ့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် အရာက၎င်း၏ဘက်ထရီကိုပူဇော်နိုင်ပါတယ်။ ၂ ပတ်ကြာအသုံးမလိုသောအသုံးပြုမှု အကြီးဆုံးမော်ဒယ်များအတွက်အားသွင်းစရာမလိုပါ။ လက်ရှိစျေးကွက်တွင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပိုမိုများပြားသောစမတ်နာရီများထဲတွင်အချို့သောနံပါတ်များရှိသည်။
1 Honor Magic Watch 2, ဘက်ထရီနှစ်ပတ်ကြာသည်
2 Honor Magic Watch 2၊ စျေးနှုန်းနှင့်အခြားသောအရာများ
Honor Magic Watch 2, ဘက်ထရီနှစ်ပတ်ကြာသည်
ကျနော်တို့ပြောခဲ့သလိုပဲ Battery ရဲ့ကြာချိန်ဟာအထင်ရှားဆုံးအချက်တွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပေမယ့်လည်း Magic Watch2သည်အခြားရှုထောင့်များကိုလည်းထင်ရှားသည်။ ဤနည်းအားဖြင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရရှိရေးသည်သော့ချက်ဖြစ်သည် သင်၏လည်ပတ်မှုကိုစီးဆင်းနေစေရန်အတွက်ချောမွေ့စွာလုပ်ဆောင်နိုင်အောင်လုပ်ဆောင်ထားသောစနစ်.
ရွေးချယ်ထားသောပရိုဆက်ဆာ ဒီ Magic Watch အသစ်အတွက် Kirin A1 ပါ။။ ဘာမှမထူးခြားတဲ့ Processor တစ်ခု။ ဒါပေမယ့်ဘာဖြစ်ခဲ့သလဲ ဒီအမျိုးအစားစက်ပစ္စည်းများအတွက်သီးသန့်ဖန်တီးခဲ့သည် နှင့်အတူ၎င်း၏မစ်ရှင်ဖြည့်ဆည်း အလွန်ဆွဲဆောင်မှုအသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကိုကမ်းလှမ်းပြည့်စုံ solvency.
ငါတို့ရှာတယ် နှစ်ခုဗားရှင်း ကွဲပြားခြားနားသောအရွယ်အစားအတွက်လည်းကွဲပြားခြားနားသော resolution ကိုအတူ။ ၄၂ မီလီမီတာမျက်နှာပြင်၊ ၃၉၀ x ၃၉၀ pixels ရှိသည်နှင့်ပြသမှု 46 မီလီမီတာ၏ resolution နှင့်အတူ 454 454 pixels ကိုက x။ ဒီဇိုင်းနှင့် ပတ်သက်၍ Magic Watch ၏ဤမူကွဲအသစ်တွင်၊ ပိုပြီးကြော့နှင့်သန့်စင်ပြီးစတိုင်။ သော်လည်း အားကစားအသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်သည့်အကျိုးခံစားခွင့်များကိုမစွန့်လွှတ်ဘဲ အလွန်စွယ်စုံ။
Honor Magic Watch 2၊ စျေးနှုန်းနှင့်အခြားသောအရာများ
ဒီဇင်ဘာလလယ်အထိ Honor ဝတ်ဆင်နိုင်သည့်အချိန်အထိစောင့်ဆိုင်းရ ဦး မည်။ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့ပြီးသားစျေးနှုန်းများကိုငါသိ၏ ငါတို့က၎င်း၏ဗားရှင်းအသီးအသီးအဘို့အပေးဆောင်ရပါလိမ့်မယ်။ အသေးဆုံးဗားရှင်း၄၂ မီလီမီတာကုန်ကျမည် အကြောင်းကို 179 ယူရိုနှင့် အဓိကဗားရှင်း, 46mm, 189 ယူရို။ သူတို့ပေးသောအင်္ဂါရပ်များနှင့်ဒီဇိုင်းများကိုကြည့်။ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပုံရသည်။
ငါတို့ပြောနှင့်ပြီးသည်မဟုတ်။ နှလုံးခုန်နှုန်းနှင့် atrial fibrillation အာရုံခံကိရိယာ။ ဆက်သွယ်မှု Bluetooth 5.1, built-in မိုက်ခရိုနှင့်စပီကာ၊ အကြိမ်ရေနှစ်ဆသော GPS၊ ရေခုခံမှုနှင့် multi-function NFC။ ကျနော်တို့လုံးဝလွဲချော်ဘာမျှမတွေ့မြင်။ Honor သည်ကဏ္တွင်နေရာရရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သည့်အလွန်ပြီးပြည့်စုံသောစက်ကိရိယာနှင့်ပြင်းထန်စွာလောင်းသည်။ မင်းရှာနေတဲ့ခရစ္စမတ်လက်ဆောင်လား
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ » ဂုဏ်ပြုသည့် Magic Watch2တင်ဆက်သည်